Topaz dia vatosoa tena fahita saingy tsy fahita firy ny topazan'ny mason'i Cat - video
Topaz dia vatosoa tena fahita saingy tsy fahita firy ny mason'ny topazan'ny masony. Ny loharano roa lehibe dia i Burma (Myanmar) sy i Madagasikara
Ny topaz madio dia tsy miloko sy mangarahara, fa matetika no voasaron'ny fahalotoana, ny topaz dia karazana divay mena, mavo, mavokely, mena, mavo, manga na mavo. Mety ho fotsy ihany koa izy io, fotsy maitso, manga, volamena, mavokely (mavokely), mavo mena mena na tsy misy atiny.
Orange topaz, ny vatan-jaza ara-pomba fanao amin'ny volana Novambra, mariky ny fisakaizana, ary ny vatosoa an'ny fanjakana amerikan'i Utah.
Topaz imperial dia mavo, mavokely (mahalana, raha voajanahary) na pink-orange. Ny Topaz Breziliana Imperial dia matetika manana jiro mamirapiratra ho an'ny tonon-kira volom-bolamena, indraindray misy volony mihitsy aza. Maro ny menaka na menaka topazes no anaovana azy ireny mba hampiroboroboana mavo, volomparasy, mavokely na volomparasy mavo. Mety misy vato Topaz imperial ka mipaka amin'ny fiposahan'ny masoandro amin'ny fotoana maharitra.
Blue topaz dia vatosoa an'ny fanjakana amerikanina any Texas. Raha ny loko voajanahary dia tsy fahita firy. Matetika, tsy misy loko, volondolo na volondava mavo sy manga ny hafanana ary voageja noho ny hafanana mba hamoahana ny maizina kokoa.
Ny Topaz dia matetika mifandray amin'ny vato malemy vita amin'ny silikana amin'ny karazana granite sy rhyolite. Amin'ny ankapobeny, dia mihodikodina amin'ny pegmatites granita na ao anaty lava-podiarana amin'ny rhyolite lava, anisan'izany ireo ao amin'ny Topaz Mountain any andrefan'i Utah sy Chivinar any Amerika Atsimo. Azo jerena miaraka amin'ny fluorite sy ny cassiterite any amin'ny faritra samihafa ny tafiky ny Ural sy Ilmen ao Rosia, any Afghanistan, Sri Lanka, Repoblika Tseky, Alemana, Norvezy, Pakistan, Italia, Soeda, Japon, Brezila, Meksika, Nosy Flinders, Nizeria sy Etazonia.
Ny mason'ny Cat
Ao amin'ny famolavolana, ny fifandirana, ny fisavana na ny vokatra amin'ny saka, dia vokatra hita taratra amin'ny taratra sasany. Mifototra amin'ny "oeil de chat" frantsay, izay midika hoe "maso ny saka", dia miseho avy amin'ny firafitry ny fitaovana iray, toy ny hoe kisary, topazan'ny mason'ny saka, na amin'ny fampidirana fibrous na kavity ao anaty vato, toy ny kisarisary ny maso. Ny fako miteraka fifindrana dia ny fanjaitra. Ireo karazam-panadihadiana dia tsy nahitana porofon'ireo rongony na fibre. Ny fanjaitra dia manosika ny rehetra hifangaro amin'ny tarehimarika amin'ny endriky ny cat. Ny mari-pandrefesan-tsoratry ny fanjaitra dia mifanandrify amin'ny iray amin'ireo telo orthorhombic axes of the chrysoberyl, vokatry ny fananganana io lalana io.
Ny endriny dia mitovitovy amin'ny famirapiratan'ny volon-dandy. Ny tarehimarika manjelanjelatra amin'ny hazavana miredareda dia manjavozavo hatrany amin'ny fitarihan'ny fibre. Ho an'ny vatosoa iray hampiseho io vokatra io tsaratsara kokoa, ny endrika dia tsy maintsy ho cabochon. Mifangaro miaraka aminà toera-ponenana iray, fa tsy amin'ny sarotra, miaraka amin'ny fibre na ny rafitra fibrous mifanohitra amin'ny fototry ny metaly vita. Ny be pitsiny tsara indrindra dia mampiseho olona maromaro. Vondron'ilay hazavana mamakivaky ny vato rehefa miverina. Ny vato vatom-boninkazo Koyoyant dia mampiseho fihenan-koditra mifangaro, toy ny karazam-borona amin'ny karazany. Ny vato vongana dia tsy mampiseho tsara ny vokany.
Topazan'ny mason'i Cat avy any Burma
Vidio ny topazan'ny mason'ny saka ao amin'ny magazay
Tags bicolor, topaza